Eyona smartwatches-iingcebiso kumadoda aStylish | Amadoda aQinisekileyo
Olona lawulo lubalaseleyo
UAlicia tomero | | yokuPhila, fashion, Te knoloji, Imizila
Los ilindi abantu abakrelekrele bafumana umhlaba kubo bonke abo bantu bafuna ukubeka kude iselfowuni yabo iiyure ezimbalwa kwaye banento esandleni ebaboleka imisebenzi yayo emininzi. Namhlanje ziye zavela ngokuxhumaxhuma kunye nemida, zizibekela iinjongo ezinkulu kwaye sijonga kwindaleko yabo ukuba abavelisi bazisa njani Izindululo zabo ezilungileyo kwintengiso.
Ukwazi ukuba yeyiphi eyona smartwatch efanelekileyo kuya kufikelela kuphela yeemfuno zomntu ngamnye. Olona jonga lubalaseleyo luya kuvela kwisandla sika enika izibonelelo ezingaphezulu, eyona igqibelele kuwo onke amabakala kunye naleyo sele inamava ebaleni. Eyona intle okanye ebiza kakhulu ayisixabisi.
1 Zingandinika ntoni iiwotshi ezifanelekileyo?
2 Olona lawulo lubalaseleyo
2.1 Uthotho lwee-Apple 6
2.2 Xiaomi Mi Bukela iLite
2.4 UGarmin Vivoactive 3
2.6 Xiaomi MI BUKELA
Zingandinika ntoni iiwotshi ezifanelekileyo?
Ezi wotshi azisasebenzi nje ngokwenza imidlalo. Banobutsha bokuba ukungapheli kwemisebenzi eya kuthi incede ukungabikho kwefowuni yakho ephathekayo kwaye uyisebenzise ngayo. Inkqubo yayo yeBluetooth iya kukwenza ube nayo idibanise iwotshi kunye neselfowuni onokuyigcina epokothweni okanye edityaniswe nebhanti yengalo.
Ezinye iifowuni sele zifikile kunye ne-quirk yamandla faka ikhadi leSIM ngaphakathi kwazo kwaye ke shiya ifowuni naphina. Phakathi kweempawu zayo kukubekwa kweGPS, ukuphendula umnxeba, ukubonisa umyalezo, ubomi bebhetri obude, ukubek'esweni ukubetha kwentliziyo, imemori yomculo, ukunganyangeki kwaye ziyangena emanzini. Ubuncinci ezi zezona mpawu zibalulekileyo. Okulandelayo, siza kubona ukuba zeziphi iimodeli ezilungileyo ezikhoyo namhlanje kwintengiso.
Uthotho lwee-Apple 6
Yenye yezona zinto zithengiswa kakhulu kwaye yenye yezona zisetyenziselwa zona Uluhlu lwe-iPhone brand. Ikuvumela ukuba uphendule kwizaziso kwaye uqhagamshele kwi-Siri. Eyona nto intle malunga nale wotshi yile Ukuqaqamba okuphezulu kwe-nit evumela ukuba isikrini sayo, sikwazi ukubonakala ngaphandle kobunzima emini. Isikrini sakho sinobungakanani be Iintshi ezingama-1.2.
Iya kukunceda ngokulandelelana kunye noqeqesho rhoqo, phendula imiyalezo, thabatha iifowuni kwaye yazisa imisebenzi kwezinye izicelo. Ayinamanzi (ukuya kuthi ga kwiimitha ezingama-50)Ine-GPS kunye nengozi kunye ne-sensor yokuwa. Ixabiso layo: ngaphezulu nje kwe- € 400.
Xiaomi Mi Bukela iLite
Le wotshi izalisekisa phantse yonke imisebenzi onokuyilindela kwi-smartwatch. Kufanelekile kwimidlalo enjengokudada, ukuhamba intaba, ukubaleka, ukunyathela, ukuhamba ngomkhondo, kunye nokuhamba ngebhayisikile. Jonga ukubetha kwentliziyo yakho imini yonke kwaye une Umsebenzi we IGPS. Imilinganiselo yesikrini sakho 1.2 intshi ngokuqaqamba kwama-350, kwaye ihlala ixesha elide ibhetri yakho ukuya kwiintsuku ezili-9 ukusetyenziswa okuqhelekileyo. Ixabiso layo lijikeleze i- € 50.
Ngumjikelo wezemidlalo ophezulu, ezilungele imidlalo, ixesha lokuphola nelokusebenza. Measure Isantya sentliziyo iiyure ezingama-24 ngosuku kwaye kubalwa amanyathelo emihla ngemihla athathiweyo kunye neekhalori zatshiswa. Isikrini sayo sijikeleze kwaye sibonisa imizobo yayo ngombala. Inomsebenzi weGPS, enezixhobo eziphezulu ze-silicone kunye nobunzima obuncinci (25 gram). Ixabiso layo lijikeleze i- € 280.
Ukusuka ekhohlo ukuya ekunene: Apple Watch Series 6, Xiaomi Mi Watch Lite, Garmin Forerunner 235
UGarmin Vivoactive 3
Le wotshi ine Isikrini esijikeleze i-intshi eyi-1,6, kulula ukuyifunda, ene-GPS eyakhelweyo kunye kunye nokudityaniswa kwezicelo yokujonga imisebenzi xa udlala imidlalo. Ayinamanzi kwaye inokuntywila ukuya kwi-50 m. Inokunxibelelana ne-smartphone yakho (i-Android 4.4 kunye ne-iOS 10.0 okanye kamva) kwaye ufumane kwaye uthumele imiyalezo. Eminye imisebenzi ebesiyithanda kukuba ihlala ixesha elide kangangeentsuku ezisi-7 ngaphandle kokuvula i-GPS kunye ungahlawula ngaphandle konxibelelwano. Ixabiso layo lijikeleze i- € 150.
Le smartwatch yenye yezona zixabisekileyo kubathengi bayo. Une Isikrini esiyi-intshi eyi-1.2, ngokuxhathisa okukhulu kunye nobunzima beegram ezingama-68. Inika indawo yokugcina enkulu, nge-4GB kunye ne-768 MB yememori kunye nesantya esiphezulu sokuqhubekeka kwedatha.
Ine a Ukuzimela kweeyure ezingama-144 kwaye iyahambelana Android kunye iOS. Phakathi kwemisebenzi yayo zizaziso ezivela kwinethiwekhi yoluntu kunye ukwazi ukufumana iifowuni. Ikwaphethe imisebenzi esisiseko yokujonga ukubetha kwentliziyo, inkcitho yekhalori kwaye inyuke iye kuma-50 eemitha ngaphantsi kwamanzi. Ixabiso layo lijikeleze i- € 170.
Ukusuka ekhohlo ukuya ekunene: Garmin Vivoactive 3, Samsung Gear Sport, Xiaomi MI WATCH
Xiaomi MI BUKELA
Le wotshi ineyona nto iphambili kuyo ngexabiso elifanelekileyo kwaye iyi-smartwatch enkulu. Iscreen sakho si Isetyhula eyi-intshi eyi-1.39 kwaye ibhetri ine ukuzinza ukusuka kwi-16 ukuya kwiintsuku ezingama-22, kuxhomekeke ekusetyenzisweni kwayo okukhulu. Ingasetyenziselwa yonke imisebenzi yokubeka iliso kumzimba kwaye ilungele imidlalo. Unokuntywiliselwa emanzini ukuya kuthi ga kwi-50 yeemitha kwaye omnye wemisebenzi etsala ingqalelo kukuba yenza umlinganiso wenqanaba leoksijini egazini. Ixabiso layo lijikeleze i- € 100.
Eyona smartwatch igqwesileyo iya kuxhomekeka kwiziqinisekiso ekubonelela ngazo, iimfuno zomntu kunye nendlela aphila ngayo. Ezi zibuko Zisetyenziselwa ukugubungela iimfuno ezisisiseko ze-smartphone kwaye ukwazi ukulandelela impilo xa udlala imidlalo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » yokuPhila » Te knoloji » Olona lawulo lubalaseleyo
Ezona mpawu zibaluleke kakhulu kwiikawusi zamadoda
Indlela yoku-ayina ihempe ngaphandle kwentsimbi